တနင်္ဂနွေအယ်လ်ဘမ် | ဥက္ကာကိုကို
Posted by oakkarkoko on November 13, 2008
Written by ဥက္ကာကိုကို(သံတွဲ)
လမ်းက တစ်ဝက်မှာတင် ဆုံးနေတတ်တာမို့
တက်လိုက် ကျလိုက် စိတ်အလျဉ်ကို
တရားသေ မတွက်ချင်တော့ဘူး ။
မိုးစက်တွေရဲ့ ရစ်သမ်ကို လိုက်ဖမ်းရင်း
တနင်္ဂနွေသားစစ်နဲ့ ထုဆစ်ထားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်အဖြစ်
ဂီတအသစ်ထဲ ရဲရင့်ခဲ့ …….
ဖတ်လက်စ ၀ါကျတစ်ချို့ကို ပိတ်ထားခဲ့ …….
ဆာလောင်နေတဲ့ မိုးတိမ်တွေကို စွန့်ပစ်ခဲ့ …….
အဆိပ်သင့်ကမ်းခြေကို ချန်ရစ်ခဲ့ ………..
ခဲသားရောင်လိပ်ပြာတွေက နှလုံးသားကို လာခြောက်လှန့်နေတယ်
ဟော ဟိုမှာ နေညိုတော့မယ်
၀ပ်ကျင်းထဲက ခုန်ထွက်လာတဲ့ အာဃာတပေါ်မှာ
ပက် လက် ကြီး မျော ……။ ။
သောင်းပြောင်းထွေလာရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း ၊ ဒီဇင်ဘာ ၊ 2008 ။